Tsy mety raha mividy Mac izao | Avy amin'ny mac aho
Ity lahatsoratra ity dia taratra manokana amin'ny fotoana fanavaozana ho an'ny Mac, tsy zavatra ofisialy avy any Apple, lavitra azy io. Raha vantany vao nohazavaina ity dia hilazako fa ny daty izay ananantsika ankehitriny fotsiny no izy ary hiitatra amin'ny hevitro hatramin'ny volana jona izay hazava kokoa amintsika ny momba ny tovolahy avy any Cupertino manolotra anay. Amin'ity fehezanteny farany amin'ny volana martsa ity izay ny iPhone SE sy ny iPad Pro 9,7-inch vaovao natolotra, Noheveriko fa hahagaga antsika Apple amin'ny fanavaozana MacBook 12 small kely mba hankalazana ny tsingerintaona voalohany, saingy tsy.
Tsy nisy na iray aza tamin'ireny fehezanteny lehibe ireny ary hita miharihary ny tsy fahatongavan'izy ireo ny Mac, fa ny ampitson'io dia tsaho tamin'ny MacBook vaovao dia niseho teo aloha. Apple dia tsy nanome toky an'ireo Mac malalantsika, saingy tonga ny milina tsaho rehefa afaka andro vitsivitsy ary izany no antony tiako hizarana ny fandinihako izay voalaza ao amin'ilay lohateny: tsy mety ny mividy Mac izao.
Ny tambajotra Mac iray manontolo dia eo am-panaovana ny fanovana, na noho ny mpanodina na koa noho ny mety hahitana fiovana hatsarana sasany. Apple dia efa ela no niaraka tamin'ny Mac raha fantatsika ankehitriny ary na dia marina aza fa manana endrika tsara tarehy izy ireo, amin'ity taona ity dia afaka manova na manampy zavatra amin'ny Macs vaovao izy ireo. Nefa ity dia mety hijanona ao aoriana ihany hatramin'ny ny tena zava-dehibe dia ny fitaovana anatiny ary io no efa hiova.
Mba hahatratra kely ireo daty navoakan'ny Apple na nohavaozina Ireto ny Macs: iMac tamin'ny Oktobra 2015 lasa teo (miaraka amin'ny Retina 21,5 added) ary io no hany Mac azontsika eritreretina hividy amin'izao fotoana izao, ny MacBook Pro amin'ny Mey 2015, ny MacBook 12 ″ tamin'ny volana aprily tamin'io taona io ihany , afaka manokana lahatsoratra iray ho an'ny MacBook Air izahay, ilay Mac mini iray ihany ary ny Mac Pro na MacBook Pro tsy misy fampisehoana Retina dia tantara iray hafa.
Voalaza fa mazava ny zava-drehetra Raha ao anatin'ny toe-javatra mila mividy Mac tsy ilaina ianao na satria hitanao fa lafo dia lafo dia tohizo, satria Macs ankehitriny dia milina matanjaka be sy fividianana azo antoka, fa raha azonao atao ny mandray ny torohevitro dia tokony hatao izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Tsy mety ny mividy Mac izao
Eny, nividy MacBook Air aho roa volana lasa izay… Chafa inona izany
Salama Surce, tsara foana ny mividy Mac ary azoko antoka fa hanome anao fifaliana maro ity MacBook Air ity. Ny zavatra ezahiko lazaina dia ireo mpampiasa mikasa ny hividy Mac nefa tsy mila azy maika, tsara kokoa ny miandry ireo modely vaovao haseho.
Ireto Mac vaovao resahako taratra ireto dia mety ho tonga amin'ny volana Jona na Oktobra, noho izany ny fividianana Mac dieny izao dia tsy fividianana ratsy, lavitra izany.
Kart dia hoy izy:
Aza adika vilana ilay lahatsoratra satria voalaza fa tsara daholo izay Mac fa afaka miandry handany tsara kokoa ny fahavaratra ianao. Miasa tsara ny MacBook Air
Mamaly an'i Kart
Salama kart, taorian'ny namakiako ny lahatsoratrao tamin'ny taon-dasa, mifandray aminao aho satria liana mividy rivotra macbook aho ary amin'izay novakiako dia tsara kokoa ny miandry ahy. Fa maninona Hisy zavatra tsara kokoa noho ny 13 santimetatra ve hivoaka? Manantena aho fa afaka manampy ahy ianao.